Soo -saarayaasha Soo -saareyaasha Kalluumeysiga Glow Stick - Shixnadaha Shiinaha ee Alaab -qeybiyeyaasha & Warshadda
Qeybta: Ul kalluunka Ul, Qalabka Kalluumaysiga, Qalabka Kalluumaysiga
Habka Kalluumaysiga: Trolling & Doon Kalluumaysiga, Kalluumeysiga Guud, Kalluumeysiga Carp, Kalluumeysiga Biyaha -macaan, Tuuritaanka Sinka, Kalluumeysiga Badda
Tilmaamo: Si sahlan loo isticmaalo
Miisaanka saafiga ah (g): 20
Boorsada Foil Flow Glow Stick Litter Girl Glow Sticks
Nalalka Tooska ah ee Warshadda Tooshka Ulaha Kalluumeysiga Kiimikada Iftiinka Ul Kalluumeysiga
Qeybta: Usha iftiinka Kalluumeysiga, Qalabka Kalluumeysiga, Qalabka Kalluumeysiga
Habka Kalluumeysiga: Trolling & Doonyaha Kalluumeysiga, Kalluumeysiga Guud, Kalluumeysiga Kaarbadka, Kalluumeysiga Biyaha -macaan, Tuuridda Qashinka, Kalluumeysiga Badda
100Bagag/sanduuq Cabbirro kala duwan ayaa ku dul yaal Kalluumeysiga float Rod Light Stick Glow Stick
6.0*50mm 7.5x75mm Cabbirka Kalluumeysiga Luminous Stick
Nalalka Nalalka Ul Glow Kiimiko Iftiin Habeen
Warshadda Tooska ah ee Dheemanka Dheemanka Jabaan
1. Waxaan nahay xirfadle soo saare ulaha glow kalluumeysiga, waxaanna leenahay waayo -aragnimo dhoofinta in ka badan 20 sano.
2. Badeecadaheena waxaa loo iibiyaa dalal iyo gobollo badan oo adduunka ah, taas oo ka dhigan 3/5 saamiga suuqa adduunka.
3. Waxaan nahay shirkaddii ugu horreysay ee soo saarta qaaciddada wax soo saarka, booska ugu horreeya ee warshadaha, tayada gabi ahaanba waa la dammaanad qaaday.
4. Waxaan leenahay summad iyo astaan ​​u gaar ah. Waxaan sidoo kale taageernaa habka loo habeeyay.
5. Faa’iidooyinka yaryar waa mabda’a wax soo saarka shirkadda.
5pcs/Bag Qeexitaanno Kaladuwan Iftiimin 10 Saacadood Ulaha Uloow Kalluumeysiga Ulaha Fallaadha ee Sabeeya
Warshadda Toosan 50baag/sanduuq Aaladaha Kalluumeysiga ee Glow Glow Stick
Tooska Warshadda 50bag/sanduuq dhalaalaysa usha kalluumaysiga float Rod Light Dark Glow Stick ee Kalluumaysiga
Muujinta Fiiro gaar ah: Xirxirida warshadeena: 2pcs/bac, 50bag/sanduuq gudaha ah, Wadar ahaan 100pcs Ganacsiyo kale oo ku jira xirxirida madal: 5pcs/bac, 10bag/sanduuqa gudaha, Wadarta 50pcs Qiimaha warshadeena waa kan ugu hooseeya. Annagu ma nihin shirkad ganacsi, Waxaan si toos ah macaamishayada u siinnaa macaashka dhex -dhexaadiyayaasha. Shiinaha dhexdiisa, Waxaan nahay soo saare ugu horreeyay oo ku takhasusay qoryaha iftiinka kalluumeysiga. Iyada oo ku saleysan farsamada qaaciddada dammaanad qaadka ee warshadaha oo dhammaystiran, alaabtayada ayaa ku noolaan karta th ...
Tooska Warshadda 3.0x25mm. 4.5x37mm Custom Luminous 12 Saacadaha Ulaha Kalluumeysiga
Waxaa jira ilaa shan soo -saare oo joogto ah guud ahaan. Waxaan nahay soo saaraha ugu horreeya ee ku takhasusay ulaha kalluumeysiga. Intaa waxaa dheer, laba ka mid ah, oo leh qayb yar oo suuqa ah, dhammaantood waxaa sameeyay shaqaalaheena xirfadda leh laftooda. Dhammaantood waa qaaciddada jiilka kowaad. Muddada iftiinku waxay ka yar tahay shan meelood meel alaabooyinkayagii jiray.
Waxaan nahay shirkaddii ugu horreysay ee soo saarta jiil ka mid ah caanaha caanaha. Waxaan ku jirnay warshadan muddo ka badan 20 sano, sidaa darteed aad ayaan ugu kalsoonahay badeecadayada, sidoo kale waxaan rajeyneynaa inaan la sameyno iskaashi muddo dheer ah Waxaan dammaanad qaadnaa tayada dhammaan badeecadaha
Waqti Dheer oo Iftiiminaya Cimilada Fiidkii Fiidkii Fiidkii Ulaha Kalluumeysiga Usha Iftiinka Ulaha Glow Stick
Qiimaha warshadeena waa kan ugu hooseeya. Ma nihin shirkad ganacsi,
Waxaan macaashka macaashka si toos ah u siinnaa macaamiisheena.
Shiinaha dhexdiisa, Waxaan nahay soo saare ugu horreeyay oo ku takhasusay qoryaha iftiinka kalluumeysiga.
Iyada oo ku saleysan warshadaha dhammaystiran ee horseedda tikniyoolajiyadda qaaciddada, alaabtayada ayaa ku noolaan karta suuqa muddo ka badan 20 sano.